စားနပ်ရိက္ခာ Batchmakers ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ် – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / စားနပ်ရိက္ခာ Batchmakers ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ်
စားနပ်ရိက္ခာ Batchmakers ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ်
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 143 views
ကို set up နှင့်အစားအစာများများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပြီးသို့မဟုတ်ပေါင်းဘော်ရောနှောကြောင့် function ကိုသုံးစက်ကိရိယာများ. ဒိန်ခဲ-ချမှတ်သူများနှင့်ချောကလက်ထုတ်လုပ်သူများပါဝင်သည်.
မျိုးဆက် File များနှင့်တိုင်းအစားအစာများကို item အုပ်စုအသိပညာစစ်ဆေး, အသုံးပြုသွားမည်ဒြပ်စင်အပါအဝင်, အပူချိန်, စာမေးပွဲရလဒ်များ, နှင့်အခါသမယသံသရာ.
တည်နေရာနှင့်သီးအပြေး Clear ကိုထုတ်လုပ်သူ.
switches များနှိပ်ပါဆွဲထုတ်ပြောင်းလဲမှု convert, ထွက်စတင်ရန်, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာ extruders များအတွက်အဖြစ်ထုတ်ကုန်ထိန်းညှိ, ပိုက်သက်သာရာ, နှင့်ဆိုဒီယမ်ပို့ပေး.
ဖြစ်နိုင်ခြေအောင်မြင်မှုများ detect လုပ်ဖို့ tools များအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ညှိ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာထွက်ပြေးသောအခါသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းဘို့အဖြစ်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ကြေညာချက်မလိုချင်တဲ့အကြိုက်သို့မဟုတ်အမှား.
ပေါင်းစပ်ခြင်း tools များတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လေ့, တစ်ခါတလေစားဖိုမှူး, ပေါင်း, အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ, အညီမှဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ဟင်းလျာများ.
ပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောနေခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်, အညီမှချက်ပြုတ်နည်းများ, အားဖြင့်အလုပ်သမား, ဒါမှမဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်သီးကြောင်းနွေးထွေးမှုနဲ့အရောအနှောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု.
တိကျတဲ့အရသာ၏အစားအသောက်ထုတ်ကုန်တွေကိုဖန်တီးရန်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုလိုက်နာပါ, ကိုက်ညီမှု, ရှင်းလင်းသော, အမှေး, သို့မဟုတ်အရောင်.
ဆင်ခြင်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ရန်ဒြပ်စင်များနှင့်ကို select, ချိန်ခွင်လျှာအကြေးခွံများနှင့်အပြည့်အဝသို့မဟုတ် Uk လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအလုပ်သမား.
ထုတ်ကုန်စတင်ရန်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်စစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းညှိဖို့ device ကို setting များကိုပြောင်းလဲပါ.
တွဲဖက်မှုစီးရီးဆုံးဖြတ်ရန်, အပူချိန်အကျိုးဆက်များ၏နားလည်မှုပေါ်နှင့်အချို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ဗဟိုပြု’ နိုင်မှု.
bins ပြင်ဆင်နေသို့မဟုတ်ပြေးဖြည့်ပါ, ယျာဉ်လှည့်, ထိုကဲ့သို့သောအိုးအဖြစ်, ဖိအားယျာဉ်, သို့မဟုတ်သီး, ပစ္စည်းများ အသုံးပြု., အဆို့ရှင်များက, Push စတင်ဖြင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်.
အဆိုပါ batchmaking နည်းလမ်းလမ်းညွန်အတွင်းပိုင်းအားပေးအားမြှောက်နေသောထောက်ပံ့ရေးကွဲပြားခြားနားန်ထမ်း.
Homogenize သို့မဟုတ် pasteurize ပစ္စည်းများအတည်ပြု butterfat အကြောင်းအရာအရသို့မဟုတ်ခွဲထုတ်ရှောင်ရှားရန်, တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း system ကိုအသုံးချဖို့.
ဖျက်သိမ်းသည်ဟုအချဉ်ပေါက်သိုက် hasbeen သီးဆန်းစစ်သေချာစေရန်စင်ကြယ်စေပြီးနောက်,.
စစ်ကြော, အတှေ့အကွုံ, နှင့်မျိုးဆက်စဉ်အတွင်းအရသာဖြေရှင်းချက်ဥပမာဖိုင်ရလဒ်များနှင့်ဆိုင်သောနေရာများတွင်, နှင့်အစီအစဉ်, နှင့်အရည်အသွေး, အရောင်, မျက်နှာပြင်, အရသာ.
တမူထူးခြားတဲ့လေးနှင့် ပတ်သက်. စာမေးပွဲအစားအစာများဖြေရှင်းချက်စမ်းသပ်မှုတွေ, အချဉ်ဓာတ်အဆင့်ကို, ရေအကြောင်းအရာ, သို့မဟုတ် butterfat အကြောင်းအရာ, နှင့်အလိုဒီဂရီရောက်ရှိသည်အထိဆက်လက် run နေ.
အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ၏ကွဲပြားမျိုးများအတွက်ဟင်းလျာများ Make သို့မဟုတ် adjust.
ရာထူးအစားအစာများအစိုးရစည်းမျဉ်း-အဆိုအရသို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆသတင်းအချက်အလက်-အညီ, နှင့်မျိုး, အရောင်, အမှေး.
မီးဖုတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းနေသည်ဟုသူ၏ဒြပ်ပေါင်းများအတိုင်းအတာကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ထုတ်ကုန် polishing function.
ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နမူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြင်ဆင်နေ ALTER, ဦးစားပေးရညျအသှေးရောက်ရှိဖို့ဒြပ်စင်များနှင့်အခါသမယကျည်ပြောင်းလဲနေတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာ texture သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်.
ထုတ်ကုန် manipulate, ပစ္စည်းကိရိယာအသုံးချဖို့အားဖြင့်, ထုတ်ကုန်လှိမ့်ရန်, သို့မဟုတ်ထခွဲထွက်, ဖွင့်လှစ်, ဆုပ်နယ်, လေပြင်း, ခိုင်မာသော, အနိမ့်, ဆွဲသို့မဟုတ်လက်.
Reading နားလညျမှု-နားမလည်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်စာပိုဒ်တိုများနှင့်အပိုဒ် created.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ပေးခြင်းသည်အခြား-လူတွေကိုလက်ရှိပြောနေကြသည်အရာကိုပြည့်စုံအာရုံစူးစိုက်မှု, created ခံရသည့်အချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ကို အသုံးပြု., သင့်လျော်သောအဖြစ်ကိုအံ့ဩကိစ္စများ, အစားမသင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing ထက်.
-talk စကားပြောသော-မှအခြားသူများအားမစိုက် data တွေကိုဖော်ပြ.
ယုတ္တိဗေဒ Criticalthinking-အသုံးချပြီးနှင့်ရွေးချယ်မှု options များ၏အခွက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုဆိုတာတွေ့ရဖို့ထင်, ပြဿနာများရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
အသစ်သောအချက်များလေ့လာနေသို့မဟုတ်ပညာပေးသည့်အခါနည်းပညာ-ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်သမားနည်းပြ / ညာဘက်ပြဿနာများအတွက်သင်ကြားပို့ချမှုနည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်သင်ယူခြင်း.
မိမိကိုယ်ကို၏စစ်ဆေးခြင်း-MonitoringORAssessing ထိရောက်မှု, အပိုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကုစားအရေးယူစဉ်းစားပါသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုသူတို့လုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့ othersA တုံ့ပြန်မှုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့် သိ..
othersI အပြုအမူပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ control-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ.
လူပုဂ္ဂိုလ်များကို enable လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေကုမ္ပဏီအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ဖော်ထုတ်ခြင်းအဆင့်မြင့်ပြဿနာများနဲ့ options တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုဆနျးစစျနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆက်စပ်ဒေတာ critiquing.
စစ်ဆင်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း-ဆန်းစစ်ကို item သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်.
အင်ဂျင်နီယာအသုံးပြုသူအစေခံရန်ဒီဇိုင်း-အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကိရိယာများလိုအပ်ချက်များကိုအောင်သို့မဟုတ် align လုပ်ဖို့.
တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပါရန်အလေးအနက်ထားလိုအပ်ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ကြင်နာ.
တပ်ဆင်နေ-ထည့်သွင်းခြင်းထုတ်ကုန်, ဂီယာ, ဝါယာကြိုးများ, သို့မဟုတ် packages များကျန်တာတွေဖြည့်ဆည်းရန်.
အတော်ကြာအကြောင်းပြချက်များအတွက် coding-Creating ကွန်ပျူတာ packages များ.
function ခြေရာကောက်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း features တွေ, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာသည်လက်ရှိတွင်သင့်လျော်စွာလည်ပတ်တစ်ဦးပစ္စည်းကိရိယာများလည်းမရှိသေချာစေရန်.
operating နှင့်မဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်ရမှန်းရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းဆက်ကြောင်းများအတွက် troubleshooting-ဆုံးဖြတ်အကြောင်းရင်းများ.
ပွငျ-ပွငျပစ္စည်းကိရိယာများဒါမှမဟုတ်လိုအပ် tools တွေကိုအသုံးချဖို့နည်းလမ်းများ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးကုန်စည်စာမေးပွဲနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအကဲဖြတ်-ပွုလုပျခွငျး, ကုမ္ပဏီများမှ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုမှန်းရန်.
လေထုထဲတွင် analysis-ကိုစူးစမ်းဘယ်လိုပြုပြင်မွမ်းမံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, လည်းအခွအေနသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်.
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ-ရယူနှင့်ထုတ်ကုန်များသင့်လျော်အသုံးပြုမှုအတွက်စောင့်ကြည့်၏ကြီးကြပ်မှု, ထူထောင်မှု, နှင့်အရင်းအမြစ်များလုပ်ကိုင်ရန်အထူးသဖြင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-ခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု, တွန်းအားပေး, သူတို့လုပ်ဆောင်အဖြစ်ရှေးရှေးညွှန်ပြ, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်.
အကြီးတန်း High School တွင်အဆင့် (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်း High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
အများအပြားကကောလိပ် Classes ရဲ့
အောင်မြင်မှု / လုပ်ငန်း – 89.63%
ဇွဲ – 89.56%
စီမံကိန်း – 91.42%
ခေါင်းဆောင်မှု – 87.86%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 94.98%
အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စ – 89.12%
လူမှုနေရာချထားခြင်း – 91.08%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 91.55%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 91.51%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 94.90%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 92.03%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 90.09%
လွတ်လပ်ရေး – 88.43%
တိုးတက်ရေး – 84.55%
analytical အတွေးအခေါ် – 85.40%
ပစ္စည်းတိကျမော်ဒယ်များ Full-size ကိုအကွာအဝေးနှင့်သစ်သားစည်းဝေး. Includes loft employees and wooden lure …